Ukucoca okokuqala kwe-Galaxy A9 Pro | I-Androidsis
I-Galaxy A9 Pro iya kuba neekhamera ezine zangasemva
UEder Ferreño | | Izaziso, Samsung
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo Isamsung yazisa ngokusemthethweni ifowuni yayo yokuqala ineekhamera ezintathu zangasemva. Nge-11 ka-Okthobha, inkampani kulindeleke ukuba inikezele ngefowuni yayo entsha, ebonakala ngathi yiGalaxy A9 Pro.Ngesibhengezo, kwathiwa ifowuni yayiza kuba neekhamera ezine. Yathathwa njengenye into yokuba kuya kubakho amabini angasemva kunye amabini ngaphambili. Nangona iya kwahluka ngokwenyani.
Ukususela le Galaxy A9 Pro iya kuba neekhamera ezine zangasemva. Ukucaciswa kwale fowuni intsha ivela kwinkampani yaseKorea sele kuvuziwe, okuza kuboniswa kwiiveki nje ezimbalwa. Ke sinokufumana umbono.
Ikhamera yangaphambili yefowuni iya kuba yi-24 MP. Kodwa eyona nto inomdla kukudityaniswa kweekhamera zangemva kule Galaxy A9 Pro.Ngoko iyakuba kunye neekhamera ezine zangasemva, eyokuqala kwintengiso ngokudityaniswa kolu hlobo. Sifumana izivamvo ezahlukeneyo, inye inomsebenzi.
A Ikhamera ephambili ye-24 MP, ikhatshwa yenye ye-8 MP enekona ebanzi engama-120º Ukongeza, iikhamera ezimbini zoom ziya kwaziswa. Bangayi-10 kunye ne-5 MP ngokwahlukeneyo. Indibaniselwano enamandla yeekhamera, eya kuthi ivumele abasebenzisi ukuba bathathe imifanekiso emihle ngalo lonke ixesha.
Ukuphumla, i-Galaxy A9 Pro kulindeleke ukuba ibe nefayile ye- Ubungakanani besikrini esili-6,28-intshi, Isisombululo se-FullHD + kwaye kulindeleke ukuba sibe sisikrini se-AMOLED. Njengomprosesa, kucingelwa ukuba lowo unyuliweyo uya kuba yi-Snapdragon 660, nangona ayisiyonto iqinisekisiweyo ngoku.
Imifanekiso yefowuni esikubonisa yona ngasentla, zihanjiso eziyilwe ngabasebenzisi abathile ngokusekwe kumarhe. Lo nto Akunakwenzeka ukuba uqinisekise okwangoku ukuba uyilo olucacileyo lwale Galaxy A9 Pro. Nangona kunokwenzeka ukuba iya kufana kakhulu. Nge-11 ka-Okthobha siza kushiya amathandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Galaxy A9 Pro iya kuba neekhamera ezine zangasemva
Oku kunokuba yinkcazo ye-Samsung entsha ye-smartphone eneekhamera ezi-4
Urhulumente wase-India uceba ukuvimba i-WhatsApp